Durboonni Raashiyaa sadan abbaasaanii ajjeesan akka hiikaman gaafatame - BBC News Afaan Oromoo
Durboonni Raashiyaa sadan abbaasaanii ajjeesan akka hiikaman gaafatame
Goodayyaa suuraa Wayita abbaasaanii ajjeesan Anjeliinaan ganna 18, Mariyaan 17, Kiristinaan ganna 19
Ji'a Adolessaa bara 2018 obbolaan ol adeeman sadii mi'a qara qabuun abbaasaanii waraananii wayita hirriba keessa turetti Mooskootti ajjeesan.
Qorannoon qo'atame abbaan isaanii xiinsammuusaaniis ta'e miidhaa qaamaa waggoota hedduuf irratti raawwachuutu mirkanaa'e.
Ajjeechaa raawwachuun himatamaniis turan. Obbolaan sadan akkam ta'u? dhimmi jedhu Raashiyaatti mata duree falmiis ta'ee, namoonni 300,000 ol akka hidhaa gadhiifaman iyyaannoo dhiyaate mallatteessan.
Adooleessa 27 bara 2018 maanguddoon ganna 57 abbaan isaanii Kachaachuraan jedhamu Kiristiinaa, Angelinaa fi Maariyaa waame. umuriidhaan Xixiqqoo turani. Tokko tokkoon kutaa isaatti waame hafaa lafaa sirriitti hin qulqulleessinee jechuun dheekkamee mimmixa ykn barbaree fuula isaanitti biife.
Otoo baay'ee hin turiin hirribni isa qabe, Ijoolleen durbaa sadan haaduu, Burrusaan haleeluu eegalan, mimmixaa itti biifaan, Mataasaa amma du'utti madeessan akkasuma morma fi lapheesaas madeessan. Iddoo 30 ol madeessaniitu argame.
Poolisii isaanumti waamanii ta'ii sana booda hidhaman.
Qo'annoon battaluma sana jalqabame seenaa bal'aa jeeqamuu maatii sana keessa ture mul'ise. Kachaachuraan ijoolleesaa durbaa irra deddeebiin waggoota 3'f reebaa akka ture, hiidhe akka tursiisu fi tutuqaa saalqunnamti irratti raawwataa ture.
Himannaa isaaniratti dhiyaateef akka ittisa ragaatti kan dhiyaate dhimmoota kanatu dhiyaate.
Dhimmichi saffisaan Raashiyaatti dubbii ijoo ta'e. Rogeeyyiin mirga namoomaa mirga isaanitu sarbame malee yakkamtoota miti, abbaasaaniirraa deeggarsa otoo hin taane sarbamiinsi waan irra gaheeefi midhamtoota jedhanii falmaniif.
Haata'u malee, Raashiyaan seera sarbamiinsa mirga mana keessatti raawwatamuu itti to'attu hin qabdu.
Goodayyaa suuraa Hiriira deeggarsarratti '' obboloonni sadan haa hiikaman'' jedhu Piitersbargitti bahame
Seera haaraan biyyattii bara 2017 jijjirame miseensi maatii miseensa reebichi irratti raawwatte hospitaala hin geeessine yoo ta'e maallaqaan ykn hidha amma torban 2 hidhama jedha.
Sarbamiinsa mirgaa maatii keessatti raawwatamu poolisiin biyyatti akka '' dhimma maatiitti ilaala'' ykn hin deeggaru ykn odeeffannoo bal'aa hin kennu.
Haati isaaniis akkuma ijoollee ishiitti reebichi fi rakkinni Kachaachuraan irra qaqqabaa ture. Ollaanis isaanii sodaata turan. Poolisiin dhimmicharratti tarkaanifii fudhachuun ragaan mul'isu hin turre.
Goodayyaa suuraa haadha obboloota durbaa sadanii
Wayita abbaasaanii ajjeesan haatisaanii isaan waliin hin jiraattu. Kachaachuraan haadhasaaniitiin akka wal hin arginees uggure ture.
Sakatta'insi xiinsammuu isaanirratti sassaabames qophaasanii addatti fo'amanii jiraataa fi ta'ii ture yaadatanii dhiphataa akka turan agarsiise.
Qoraannichirratti maaltu ta'e?
Dhimmiisaanii suuta ilaalamaa ture. hidhaa hin turre garuu, gaazixeessitootatti akka hin dubbanne ykn namoota biroottis dhimmicharratti akka hin haasofne dhorkamanii turan.
Abbaan alangaa ajjeechaa itti yaadamee raawwatame akka ta'e kaasuun fudhachuu dide. Wayita rafetti waraananii ganama haaduu keessa baasuun gocha haaloo ba'iinsaaf raawwatamee jedhanii falman.
Goodayyaa suuraa Obbolonni durbaa kun wayita dhaddachatti dhiyaatan
Balleessaa raawwachuun isaanii yoo itti murame amma waggoota 20'f mana hidhamu. Anjeliinaan burrusaa qopheessite, Maariyaanimmoo haaduu adamoof ta'u, Kiristinaan mimmixa fuulatti biifan qopheessite.
Garuu, ogeeyyiin seeraa ajjechaan raawwatan dhuguma dubbachuuf taanaan ofirraa ittisuuf kan raawwatamee jedhan.
Seerri yakkaa biyyatti aleellaa ofirraa qolachuun kan eeyyamamu akka tasaatti kan raawwatamu yoo ta'ee jedha. Akkasumas itti fufiinsaan iddoo tokkootti uggaramanii dararamuun yoo jiraates ni eeyyamama jedha.
Ittisni ragaa dhiyaate yakki itti fufiinsaan waan irratti raawwatameef akka hidhaarraa gadhiifaman gaafata ture.
Ogeeyyiin seera obbolota durbaa kana'' himannaan irratti dhiyaate akka addaan citu abdatu, qo'annoon qo'atame bara 2014 irraa eegale mirgasaanii sarbuun dararaa akka ture mul'ise.
Rogeeyyiin mirga namoomaa fi lammileen Raashiyaa hedduun amma seerri biyyattin dhimmicharratti qabdu akka jijjiramu, dawoon mootummaa biyyattiin miidhamtootaaf akka qophaa'u, qabiinsa namoota miidhaa qaqqabsiisaniis akka jijjiramu gaafatan.
Sarbamiinsi kun hagam hammaatadha?
Ragaan dubartoota hammamitu rakkoon walfakkatu irraa akka qaqqabu agarsiisu hin jiru. Tilmaamni jiru maatii 4 keessaa tokkoorra miidhaan mana keessatti irraa qaqqaba jedhu rogeeyyiin.
Dhimmi Margaarita Giracheevaa, kan abbaa warraa ishii inaaffadhaan harka ishii qottoon irraa cite dabalatee, himaannaan rifaachisisoon biroos ijoo dubbii ta'an.
Ogeeyyiin akka jedhaniitti dubartoonnni nama ajjeesanii mana hidhaa jiran harka 80'n maatii keessatti aleellaa irra qaqqabu ofirraa qolachuutti raawwatama.
Qaamoleen hawaasa biyyatti keessaa akka hin hiiikamne gaafatanis jiru. Waldaan 'Men's State' jedhamuu abbaan warraa mataa maatii ta'u fi Sabboonummaan adda baafamani ilaamuu hin qabanii jedhu.
waldaa kun hordoftoota 150,000 guutan midiyaale hawaasarratti qabu'' ajjeechaa dhoksaati'' jechuun akka hin gadhiifamne deeggare.
Sagalee himannaan obboloota durbaa kanarratti dhiyaate akka addaan citu gaafatutti dabaluun walaloon, hiriirri fi tiyaatirri akka hiikaman deeggaru dhiyaachaa jira.
Daariyaa Sereenkoo rogeettiin hiriira akka hiikaman deeggaruu guyyoota 3 'f turu qindeessite ,kaayyoon keenya namni kamiyyuu sodaa malee akka dubbatamuu fi oduun isaas akka dhagamu deeggaruudha jetti.
''Sarbamiinsi mirgaa mana keessatti raawwatamu Raashiyaa dhugumatti jira. tuffannee dhiisuu hin dandeenyu, garuu jireenya keenya miidha , dhuunfaanis mudannoo akkasiis qabna ''jette.
MM Denmaarki miidhaa ijoolleerratti raawwataa tureef dhiifama gaafatte
Viidiyoo Manni barumsaa Naayiroobii dhirootaa fi dargaggoo waa'ee miidhaa saalaa barsiisa.
Maanguddoon waggaa 87 looniin ajjeefaman
US loltootashee gara Saawudiitti erguuf ibsinaan, Iraan biyyoota lamaanu akeekkachiifte